अमेरिकामा आप्रावासीलाई नयाँ निति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
अमेरिकामा आप्रावासीलाई नयाँ निति
बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३ ०६:०३ मा प्रकाशित !
११ फागुन, न्युयोर्क। स्वतन्त्रताकी मुर्ती स्टाचु अफ लिबर्टीं मा अभियन्ताहरुले शरणार्थीलाई स्वागत लेखेको ब्यानर टाँसेका छन्। अमेरिकाको ब्यस्त शहर न्युयोर्कको उक्त मुर्तीमा कसरी ब्यानर राखियो यसबारे प्रहरी अनुसन्धान गर्दैछ। उकत ब्यानर राखेको १ घण्टा पछि प्रहरीले उक्त ब्यानर उतारेको थियो।
अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि आप्रवासी र शरणार्थीहरु प्रति अनुदार नीतिको घोषना गरेका थिए। उनले केही ईश्लामी देशहरुका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उक्त प्रतिबन्धको अदालतले कार्यन्वयन नगर्न भनेर स्टे अर्डर दीसकेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने नयाँ नियम लागु गरेसंगै अवैध रुपमा बस्दै आएका विदेशीलाई तनाव भएको हो ।
कागजात नभएका र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न आप्रावासीलाई देश निकाला गर्ने नयाँ नियम लागु गरिएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति अनुसार ट्रम्प प्रशासनले जतिसक्यो छिटो अवैध तरिकाले बसिरहेका आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने उद्धेश्यले यो कडा नियम ल्याएको हो । ट्राफिक नियम तोडेका र लुटपाटमा संलग्नहरुसमेत पक्राउ पर्न बित्तिकै देश निकाला हुनेछन ।
PREVIOUS POST Previous post: राप्रपा केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सम्पन्न
NEXT POST Next post: राष्ट्रिय युवा नायक अवार्ड थापालाई
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३ ०६:०३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३ ०६:०३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३ ०६:०३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३ ०६:०३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३ ०६:०३